နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀၀ ) ကြာရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားမယ့် နေရာများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingနောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀၀ ) ကြာရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားမယ့် နေရာများ
နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀၀ ) ကြာရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားမယ့် နေရာများ
October 20, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါမှာတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀၀ ) ကြာသွားရင် ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲသွားမယ့် နေရာတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်နေရာတွေက ဘယ်လို ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ သစ်တော အတော်များများ ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာမှာပါ ။
မိုးသစ်တောတွေဟာ အတော်လေးကို ပြင်းထန်းစွာ ထိခိုက်မိထားတာကြောင့် နှစ်ပေါင်း ( ၄ ) ထောင်လောက်ကြာမှ အပြည့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တစ်ကယ်ဆိုရင် မိုးသစ်တောတွေဟာ လူသားတွေ ဖျက်ဆီးမှုဒဏ်ကြောင့် ပြန်လည်ရှင်သန်တာ နှောင့်နှေးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူသားတွေသာ ကမ္ဘာကြီး‌ပေါ်မှာ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် အပင်တွေရဲ့ ကြီးထွား ရှင်သန်နိုင်နှုန်းဟာ ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကောင်းလာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ အရွယ်အစား အလွန်ကြီးမားတဲ့ အဆောက်အတွေ ပြိုကျမှာပါ ။
အိမ်တွေ ဆောက်တဲ့အခါ ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြတဲ့ ခေါင်မိုး ရေယုန်တွေဟာ အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း ( ၂၀ ) ကနေ ( ၃၀ ) အထိ ကြာရှည်ခံနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး အိမ်အတော်များများဟာ မိုးတွင်းရောက်တဲ့ အခါတိုင်း သစ်သားအမိုးတွေ နဲ့ ပြင်ဆင်ကြနာ များပါတယ်တဲ့ ။ ဒါ့ကြောင့် နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာသွားရင် အရင် ပျက်စီးမှာကတော့ သစ်သားအမိုးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အိမ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဖန်နဲ့ သတ္ထု လုပ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေဂာလည်း အချိန်ကြာရင် ပျက်စီးနိုင်တဲ့ အထဲ ပါ၀င်ပါသေးတယ် ။ စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ကျောက်တုံး သစ်သားတွေကတော့ နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀၀ ) ကျော်သွားလည်း မပျက်စီးနိုင်ပါဘူးတဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အတော်များများ မျိုးတုန်း ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ ။
အိမ်မွေး ခွေး အသေးလေးတွေ နဲ့ သိုးလေးတွေဟာ ထိခိုက်လွယ်တာကြောင့် အန္တရာယ် ကျရောက်တဲ့အထဲ ပါ၀င်နေပါတယ် ။ ဂျာမန်ခွေး ၊ သိုးထိန်းခွေး နဲဘ တစ်ခြားသော တောရိုင်း မျိုးစိတ်တွေကတော့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် တောရိုင်းထဲနေရင်တောင် ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကြောင်လေးတွေကတောဘ နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်မှာ အသားကျနိုင်ပေမယ့် အစောပိုင်းမှာတော့ ရှင်သန်ဖို့ ရုန်ူကန်နိုင်ရတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ကမ္ဘာပေါ်က အထိမ်းအမှတ် အတော်များများ ပျက်စီးကုန်မှာပါ ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတ္ထုနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦးတွေရဲ့ အဓိက ပန်သူကတော့ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တိုက်စား ပျက်စီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေ တစ်မျိုးတည်းသာ ဒီလိုမျိုး တိုက်စားတဲ့ ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းဟာ တိုက်စားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ နံပါတ်တစ် အ‌ေကြာင်းရင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အောက်ဆီဂျင် ကြောင့် သတ္ထုတွေဟာ ပျက်စီးရတာ ဖြစ်ပြီး သံချေးတက်တာကို မြန်စေပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့ လူသားတွေသာ အဆောက်အအုံတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ မလုပ်ဖူးဆိုရင် ပျက်စီးမှုက ပိုလို့တောင် မြန်လာနိုင်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ မြို့ အတော်များများဟာ ရေအောက်ထဲ ရောက်မှာပါ ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ က အမ်စတာဒမ်လို လှပတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ ရှိတာဟာ ရေနုတ်မြောင်း စနစ် ၊ ဆည် နဲ့ တံတားတွေ ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ကြောင့် တည်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ အရာတွေဟာ မြို့တွေကို ရေကြီးတာ နဲ့ ဆူနာမီလို ကပ်ဘေး တွေကနေ ကာကွယ်ပေးနေတာပါ ။ တစ်ကယ်လို့ ဒီ စနစ်တွေကို ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် လူမရှိဘူးဆိုရင် မြို့ကြီးအတော်များများဟာ ရေအောက်ထဲ နစ်မြုပ်ကုန်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် နယူးယော့ခ်မြို့ ၊ မိုင်ယာမီ နဲ့ နယူးအော်လန် လို မြို့တွေဟာ ရေမြောင်းစနစ် ၊ ဆည် နဲ့ တံတားတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးမယ့်သူ မရှိဘူးဆိုရင် ကြိမ်းသေပေါက် ရေအောက်ထဲ နစ်မြုပ်ကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်ယနေ့ခေတ်မှာ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ပြီး နောက်ပိုင်း ( ၂၀၇၀ ) ခုနှစ်ရောက်ရင် မြို့ကြီးအတော်များများဟာ ရေကြီးတဲ့ ဒဏ်ကို ခံရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀၀ ) ကြာရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားမယ့်‌ နေရာတွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှု ပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ကမ္ဘာအနှံ့က ပူလွန်းတဲ့ သဲကန္တာရတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရာများ